Ny menaka manitra faran'izay tsara indrindra ao amin'ny Amazon China Manufacturer
Description:Fantsitrana menaka tsara indrindra 2018 Amazon,Fantsitran-tsolika tena ilaina indrindra amin'ny 2018,Ny fantsom-pahalaovan-tsolika tena tsara indrindra amin'ny Amazon
Home > Products > Mini diffuser > Ny menaka manitra faran&#39;izay tsara indrindra ao amin&#39;ny Amazon
Ny menaka manitra faran'izay tsara indrindra ao amin'ny Amazon
[Azo antoka sy mahomby] manaparitaka ireo molekiola anaty rano ao anaty menaka mangatsiaka nanomainty miaraka amin'ny savaivony 0.1-5 mikroka amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo ultrasonika ny vovoka manitra itony ary tsy manimba ny singa amin'ny menaka ilaina izy io ary tsy manimba ny singa amin'ny menaka ilaina ary tsy manimba mamokatra fandotoana faharoa, azo antoka kokoa ary mahomby kokoa.
[Night Light Design] loko fito hisafidianana, io diffuser ultrasonic io koa dia manana fiasana maizina tokana alina, ny loko tsirairay dia manana hazavana roa mba hisafidianana, izy koa dia manana fiasa miloko marevaka, mamorona rivo-piainana mahafinaritra.
[3 Ny fametrahana fomba maoderina & mandeha amin'ny rano tsy misy rano] mitohy / 3 ora / 6 ora, azonao atao ny misafidy ny fotoana araka ny fanirianao.Perfect manampy ny rivotra manitra, mahazo aina ary mando mba manalefaka sy hamandoana ny hoditra maina. hijanona ho azy io ny diffuser.
[3 IN 1 Design] Ny diffuser ao an-trano dia azo ampiasaina ho fantsom-pofona, malefaka, alina maivana, tsara indrindra ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, birao, lakozia, efitrano fandraisam-bahiny sy efitra fandroana hafa.Moho ny famafazana na dia ny fofona henjana indrindra aza dia manome andro iray manontolo ankasitrahana.
[Design Design & warranty] Namboarina endrika vaovao izay mampifangaro endrika lamaody marobe miaraka amin'ny famaranana matte; Ultrasonic diffuser dia haingon-trano lamaody ihany koa.Manao manome antoka 12 volana, fiverenana na serivisy fanoloana.
Fantsitrana menaka tsara indrindra 2018 Amazon Fantsitran-tsolika tena ilaina indrindra amin'ny 2018 Ny fantsom-pahalaovan-tsolika tena tsara indrindra amin'ny Amazon Fantsitrana menaka tsara indrindra Fantsitrana menaka manitra tsara indrindra any Amazon Fantsitrana menaka tsara indrindra ao amin'ny Amazon Fitrandrahana menaka tsara indrindra any Amazon Fantsitrana menaka manitra tsara indrindra